BBC Ilhaan Cumar oo loo heysto hadal ay Soomaalida ku taageertay | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Ilhaan Cumar oo loo heysto hadal ay Soomaalida ku taageertay
BBC Ilhaan Cumar oo loo heysto hadal ay Soomaalida ku taageertay
Warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa muujineysa in Ilhaan Cumar ay wajaheyso eedeyn culus oo ku saabsan inay buunbuunisay tirada dadka Soomaalida ah ee lagu dilay howlgalkii ay Milatariga Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen sanadkii 1993-kii.
Dadka dhaleeceeyay Ilhaan, oo ay ka mid yihiin rugcaddaayadii ka qeyb galay dagaalkaas ayaa eedeyn culus u jeediyay gabadhan oo ka mid ahayd dadkii qaxootiga ahaa ee ka tagay Soomaaliya, haddana noqotay mid ka mid ah haweenkii muslimiinta ahaa ee ugu horreeyay aqalka Koongareeska.
“Ciidankeenna aad baa looga tiro batay, waxayna u dagaallamayeen inay naftooda difaacaan. Dhammaan maleyshiyaadka Soomaalida ah waxay u carari kareen meesha ay doonaan laakiin kuweenna wax waddo ah uma aysan furneyn”, waxaa sidaas yidhi Mike Durant, oo ah sarkaal howlgab noqday.
Mr Durant ayaa ahaa duuliyihii diyaaraddiisa dhulka lasoo dhigay 3-dii bishii Oktober ee sannadkii 1993-kii, kadibna ay afduubteen xoogaggii Muqdisho ka dagaallamayay.
Ilhaan Cumar ayaa dhowr jeer jeedisay hadallo liddi ku ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo mar sii horreysayna lagu dhaliilay inay soo qortay hadal muujinaya waxa loogu yeeray “Yahuud Naceyb”.
Gabadhan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ugu firfircoon ee u dhaqdhaqaaqa xisbiga dimuqraaddiga Mareykanka.
Bilo ka hor markii lagu dhawaaqay in Ilhaan Cumar ay ku guuleysatay doorashadii Maraykanka, oo ay xubin ka noqotay aqalka Koongarees-ka Maraykanka, waxaa xigay dabbaaldegyo waaweyn, maxaa yeelay waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madow oo Muslim ah oo heerkasi gaarto.
Donald Trump, oo ol’olahiisu ku dhisan yahay soogalooti-nacaybka, ayaa si weyn uga faa’ideystay hadallada Ilhaan Cumar.
Previous articleDaawo, Fidma Lasoo galinayaa dalkeena, Madaxwaynaha jabuuti oo Cabsi iyo Wel Wel ka qaaday Kacdoonada xilka lagaga tuuray kaligood taliayaashii sudan iyo aljeeriya
Next articleBBC, deg deg war, Xadka Itoobiya iyo Eritrea oo dib loo xiray